सेप्टेम्बर 2, 2018 नोभेम्बर 23, 2018 साइन्स इन्फोटेक	5 Comments चिन्हहरु
हाम्रो हिन्दु शास्त्र र संस्कार अनुसार शरिरका विभिन्न ठाँउमा हुने यस्ता जन्म निशान तथा कोठीहरुको बारेमा संस्कृति अनुसार बिभिन्न कथाहरु चल्दै आएका छन् । यस्ता रहस्यहरुमा कतिको सत्यता छ भनेर भने भन्न सकिदैन तर पौराणिक तथा घटना नै बयान गर्ने यस्ता कथाहरु भने अति प्रसिद्ध रहेका भने छन् । के तपाइलाई लाग्छ कि यस्ता सदियौंदेखि चल्दै आएका कथाहरु सान्दर्भिक छन् ? पढ्न र सुन्न रमाईलो लागेपनि यिनीहरुको बारेमा अझसम्म बैज्ञानिक ठोस आधारहरु खोज हुन् बाँकी नै होला।
आँखी भौँको बिच वा निधारमा कतै जन्म चिन्ह हुने व्यक्तिहरु सहयोगी हुन्छन्। उनीहरुमा आत्मविश्वासको कमी हुदैन। सफलताको शिखरमा आफ्नै मेहेनतले पुग्छन यस्ता व्यक्ति। बोल्ने भन्दा काम गर्नमा विश्वास गर्छन र आफैमा गर्वशाली ठान्छन्। यस्तो व्यक्तिहरु आफ्नोलागि अरुसंग सहयोग माग्न अप्ठ्यारो मान्छन्। अरु मानिसको फाइदा उठाउने मनसाय बोक्दैनन र परिवारसंगै खुसी मान्छन्। शान्ति, न्याय, धर्म, संस्कृति तथा चालचलनको अनुसरण गर्छन्।
यदि आँखामा नै जन्म चिन्ह छ भने यी व्यक्तिहरुको बानी व्यवहार सफा हुने गर्दछ । स्वार्थी हुनुका साथै पैसा सम्बन्धि कारोबारमा लोभी हुन्छन । बुद्धिमान हुनुका साथै छिटो रिसाउने प्रवृतीका हुन्छन् यी व्यक्तिहरु । गरिबीले कहिल्यै नसताहने हुन्छ, किनकी मानिसहरुले विश्वास गर्ने हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरुले धनी तथा सफा व्यवहार भएकाहरु संगै विवाह पनि गर्ने गर्दछन् ।
← विहान उठेर हत्केलाको दर्शन गर्नाले दिन नै शुभ हुन्छ
रक्सी पिउँदा किन मात लाग्छ ? →
5 thoughts on “जन्मदा शरीरमा भएका चिन्हहरुको शुभ र अशुभ फल”
Pingback:ज्योतिषशास्त्रका अनुसार शरीरको यी भागमा कोठी हुनेको हातमा पैसा टिक्दैन
Pingback:यस्तो छ हातमा हुने राजयोगलाई पनि नाश गर्न सक्ने अशुभ ‘निशान’
Pingback:ज्योतिषशास्त्र अनुसार मानिसको शरीरका कुन अंग फरफराए के फल ?
Pingback:शास्त्र अनुसार शरीरको कुन अंग फर्फराउँदा शुभ वा अशुभ के हुन्छ ? जानी राखौ
Pingback:ज्योतिषशास्त्र अनुसार यस्ता मानिसले सुन लगाउनै हुदैन, जानी राखौ